Saumsung Gear IconX, sameecadaha dhagaha cusub ee nooca Kuuriya | Wararka IPhone
Saumsung Gear IconX, sameecadaha dhagaha ee cusub ee nooca Kuuriya
Muddo bilo ah waxay ka hadlayeen samaacadaha samafalka ee Apple ay wada furan karto iyaga iyo iphoneka cusub ee iPhone 7 hadii la xaqiijiyo inaysan hada kadib heysan daaqada madaxa. In kasta oo dhagaha dhagaha ee EarPods ee hadda ay u badan tahay inay yeelan doonaan iskuxiraha danabka iyo wixii ay ku daraan sanduuqa iPhone, qaarkeen baa ku riyooda qaar sameecadaha dhagaha ee Bluetooth oo la mid ah kuwa Earin ama Bragi Dash ay horey ugu guuleysteen inay ku iibiyaan Kickstarter. Intii aad sugeysay waxa Apple sameyso, Samsung waxay qaadatay fikradaha astaamahan waxayna hadda soo saartay dhageysiyadeeda dhegaha ee Gear IconX Bluetooth.
Dhagaha dhagaha yar ee "gudaha-dhegaha" ku yaal waxay leeyihiin qeexitaannada tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay, iyagoo ka sii gudbaya waxa ay yihiin sameecadaha dhagaha fudud, maxaa yeelay waxay noqonayaan kuwo "xiran" kormeeraha garaaca wadnaha, kormeeraha dhaqdhaqaaqa jirka, kalori miiska, iwm. Dabcan waxay leeyihiin isku xirnaanta Bluetooth, 4GB oo keyd gudaha ah si aad u keydiso muusikadaada ugana dhageysatid adigoon u baahnayn inaad qaadatid iPhone-kaaga, iyo taabashada kontaroolada dusha sare ee kuu oggolaanaya inaad isticmaasho dhaqdhaqaaqyo sida taabashada ama boodboodka ah si aad u maamusho dib u soo celinta muusikada ama aad u kordhiso oo aad u yareyso mugga. Inta badan niyadjab, batteriyadeeda: kaliya 90 daqiiqo (taas oo markaa xoogaa yareyn doonta ficil ahaan) si aad uga dhageysato muusikada taleefankaaga iPhone, qiyaastii 3 iyo saacadood iyo badh haddii aad ka sameyso kaydinta gudaha ee dhagaha. Waa run in kiisku markiisa u yahay batari si uu dib ugu buuxiyo dhagaha, laakiin waxay umuuqataa in kayar ismaamul xumo inta badan dhacdooyinka.
Samsung Gear IconX-ka cusubi wuxuu horey uga soo gudbay gacmaha qaar ka mid ah baloogyo gaar ah sida The Verge, Gizmodo ama Engadget, iyo dib u eegista ayaa ku wanaagsan dhammaan dhinacyada marka laga reebo batteriga. Waxay u muuqdaan sida dhagaha dhagaha oo raaxo leh, kontaroolada sifiican ayey uga jawaabaan tilmaamaha, tayada codku way wanaagsan tahay, laakiin waxay ku jihaysan yihiin in si gaar ah loo isticmaalo marka aad u baxaysid isboortiga sababtoo ah ismaamulkooda oo xadidan. Qiimahoodu waa $ 199 waana la siidayn doonaa xagaaga kadib. Waa markiintiina, Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Saumsung Gear IconX, sameecadaha dhagaha ee cusub ee nooca Kuuriya
Semi-celi for macruufka 9.0.2-9.1 Hadda Available
Apple Pay ee Boqortooyada Ingiriiska waxay horey u dhaaftay xadka 30 rodol